Mgbe nkwekọrịta ahụ gasịrị: Otu esi emeso ndị ahịa na ụzọ ịga nke ọma nke ndị ahịa | Martech Zone
Mgbe nkwekọrịta ahụ gasịrị: Otu esi emeso ndị ahịa na usoro ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa
Tọzdee, Machị 31, 2022 Tọzdee, Machị 31, 2022 George Rowlands
Ị bụ onye na-ere ahịa, ị na-ere ahịa. Ị na- ahia.
Ma nke ahụ bụ naanị ya, ị na-eche na ọrụ gị agaala ma gaa n'ihu na-esote. Ụfọdụ ndị na-ere ahịa amaghị mgbe ha ga-akwụsị ire na mgbe ha ga-amalite ijikwa ahịa ha megoro.
Eziokwu bụ, mmekọrịta ndị ahịa mgbe ire ere dị oke mkpa dị ka mmekọrịta presale. Enwere ọtụtụ omume azụmahịa gị nwere ike ịmụta iji meziwanye mmekọrịta ndị ahịa ya mgbe erechara ya.
Ọnụ, omume ndị a ka a na-akpọ Strategy Ịga nke Ọma nke Ndị Ahịa na e mere ha iji nyere azụmahịa gị aka n'akụkụ dị iche iche.
Laghachi na ntinye ego (ROI): Onye ahịa ọ bụla ejidere bụ otu obere ndị ahịa kwesịrị inweta iji zute ebumnuche ego ha ga-enweta.
Nlebanya ka mma: Ụdị ozi ọma na nlebanya na saịtị ndị dị ka Kappa na G2 melite akara onyonyo wee wetakwu ndị ahịa.
nzaghachi ndị ọzọ: Ka ị ghara inwe mgbagwoju anya na nyocha, nzaghachi bụ ozi ime nke enwere ike iji kwalite ngwaahịa gị.
Ọ dị mma, mana kedu ka anyị si eme ya?
Ọ bụrụ na azịza dị mkpirikpi bụ nke a na-eme nke ọma, usoro ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa, ogologo azịza dị n'isiokwu a.
Ọ na-akọwapụta ogidi anọ nke ihe ịga nke ọma ndị ahịa yana otu esi etinye ha n'ihu na etiti nke usoro azụmahịa gị.
Gịnị bụ ihe ịga nke ọma ndị ahịa?
Atụmatụ ịga nke ọma nke ndị ahịa bụ ụzọ na-aga n'ihu na mmekọrịta ndị ahịa.
Njikwa mmekọrịta ndị ahịa gụnyere ịtụ anya nsogbu ndị ahịa nwere ike ihu na njem ha site n'ịmara na ịghọta onye ahịa, mkpa ha na ụlọ ọrụ ha. Ọ na-achọ mmụta n'otu n'otu nke njirimara na ojiji ngwaahịa, nzikọrịta ozi ọwa ọtụtụ ọwa, yana nhazi n'ime otu iji mejuputa ihe ịga nke ọma ndị ahịa.
Yabụ, ị nwere ike ịnọ na-eche ebe nke ahụ dabara na azụmahịa gị.
Site na akụrụngwa zuru oke, azụmaahịa buru ibu na-enwe ike were ma otu nkwado ndị ahịa yana otu ihe ịga nke ọma ndị ahịa. N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ịkpọ onwe ha nnukwu azụmahịa… ma.
Azụmaahịa ndị pere mpe nwere ike ijikọ otu ire ere na nkwado dị ka otu ndị ahịa nwere ihe ịga nke ọma. Ha na-eme nke a site n'ibelata mkpa maka nkwado aka site na ịmepụta akụrụngwa mmụta nke ndị ahịa na-arụ ọrụ onwe onye: Ntọala ihe ọmụma, isiokwu enyemaka, nkuzi vidiyo, webinars mgbe niile, na ịjụ m-ihe ọ bụla nnọkọ.
Nke a na-ahapụ ndị ahịa ihe ịga nke ọma oge iji lekwasị anya n'iwulite mmekọrịta ndị ahịa ka mma, ịghọta azụmahịa nke ndị ahịa nke ọma, na inyere ha aka itolite.
N'ime ụlọ ọrụ B2B SaaS ọkachasị, ọganiihu azụmahịa nke gị dabere kpamkpam na ọganiihu onye ahịa gị. Ndị ahịa na-azụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị iji melite nke ha. Ọ bụrụ na mmejuputa ọrụ gị na-aga nke ọma maka ha, gịnị kpatara na ha agaghị anọgide na-edebanye aha na ya? Imekọ ihe ọnụ na-aga n'ihu na-eme ka ihe ọkụkụ gị na-akụ ma na-eto eto.
Ahịa Successga nke Ọma bụ azụmahịa ịga nke ọma.
Ihe ịga nke ọma ndị ahịa ogidi 1: Proactivity
Proactivity bụ isi nkuku nke ihe ịga nke ọma ndị ahịa.
Proactivity na ndị ahịa dị adị bụ isi. Echela ka onye ahịa kpọtụrụ gị na nsogbu. Tọọ oku ntule ahaziri oge niile ka ịlele ha, nụ ahụmịhe ha gbasara ngwaahịa gị, wee chọpụta ma ọ dabara na atụmanya mbụ ha.
Ọzọkwa, mgbe agbakwunyere atụmatụ ma ọ bụ ngwaahịa ọhụrụ na nso gị, gwa ụwa.
Kpọmkwem, gwa ndị ahịa ndị ga-enweta ihe kachasị na mgbakwunye ọhụrụ. Kpọọ ha ka ha gaa na oku ngosi ahaziri iche ma ọ bụ nọrọ na nnọkọ Ask-Me-Ihe ọ bụla dị ndụ wee gosi ha gburugburu.
N'ezie, ihe ịga nke ọma ndị ahịa na-arụsi ọrụ ike nke na ọ na-amalite ọbụna tupu onye ahịa bụ onye ahịa.
Ndị na-edu ndị tozuru oke ahịa n'elu ụgbọ
Ndị ndu ruru eru ire (SQL) bụ ndị nwere ohere ntụgharị kachasị elu.
Ikekwe ha egosila mmasị na ngwa ahịa ngwaahịa gị, kpọtụrụ ndị otu ahịa, ma ọ bụ debanye aha ozugbo maka nnwale efu. Ndị a bụ ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ọ dịkwa mkpa iji aka gị na-etinye aka na ha ka ha banye mgbe ha ka nọ n'ahịrị. Enwere ụzọ ị ga-esi nweta ihe kacha mma na nhụta ndị a.
Hazie oku ngosi. Ọ bụrụ na ndị ndu abanyelarị na sistemụ wee malite iji ya, lelee atụmatụ ndị ha nwaleworo wee wulite oku ngosi gị dabere na ha.
Mara ndị ndu tupu oku izizi gị. Chọpụta ọtụtụ ozi gbasara ụlọ ọrụ dịka ị nwere ike: nha, nhazi ngalaba, ụlọ ọrụ, mmezu ha na nso nso a, na mgba ugbu a. Hazie ngosi ngosi iji dabara na ọnọdụ ha kpọmkwem.
Jụọ maka nsonaazụ ha chọrọ site na ngwanrọ gị wee wulite nzikọrịta ozi gị gburugburu ebumnuche ndị ahụ. Emechaa, gosi ha ụzọ kacha nso maka ebumnuche ndị ahụ.
Egosiputala ọrụ niile site na ịga; o nwere ike ime ka ndu ya nwee nkụda mmụọ. Malite na naanị atụmatụ ndị dị mkpa ma kọwaa ihe ka ha na-etolite na ngwaahịa ahụ.
Oku nyocha ndị ahịa mgbe niile
mgbe nile oku nyocha, maka mgbe ndị ahịa do bụrụ ndị ahịa, kwesịkwara ịbụ akụkụ nke atụmatụ ịga nke ọma nke ndị ahịa gị.
Mee ka ndị njikwa ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa rụọ ọrụ ụlọ ha, nyochaa akaụntụ ndị ahịa, ma hazie mkparịta ụka mgbe niile ka ha na ha ghọta ọganihu mmejuputa ha na iji ngwaahịa a na-aga n'ihu. Usoro a na-ahụkarị nke oku nyocha oge niile nwere ike ịdị ka nke a…
Oku ntule mbu nke ndu tozuru oke ahia, dika edeputara n'elu.
Lelee mmejuputa otu ọnwa, hụ na mmejuputa ya dị mma.
Mmelite ọnwa isii maka ntụzịaka gbasara njiri mara elu.
Nyochaa otu afọ iji guzobe mgbanwe ọ bụla achọrọ tupu ndebanye aha.
Oge nwere ike ịdịgasị iche dabere na ụdị ngwaahịa na ụdị azụmaahịa nke ụlọ ọrụ gị. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ dị mkpa iji hụ na gị na ndị ahịa na-ekwurịta okwu mgbe niile.
Ịrụ ọrụ nke ihe ịga nke ọma ndị ahịa na-eme ka ọ dị iche na ụdị nkwado ndị ahịa omenala.
Site n'ịtụ anya nsogbu, ajụjụ, na arịrịọ, anyị nwere ike ijide n'aka na ọ dịghị mgbe ha ga-abụ ihe mere onye ahịa ji pụọ.
Ihe ịga nke ọma ndị ahịa ogidi 2: Mmụta
Ọ bụrụ na proactivity bụ isi nkuku nke ihe ịga nke ọma ndị ahịa, agụmakwụkwọ bụ mgbidi anọ na-edobe ihe niile n'ime.
Proactivity bụ nkuzi nke ndị ọrụ gị gburugburu ụlọ ọrụ ndị ahịa na ojiji ngwaahịa.
Agụmakwụkwọ na-ezo aka inye ndị ahịa nghọta siri ike nke otu kacha mma isi jiri ngwaahịa dabere na mkpa ha. Ndị ahịa chọrọ ozi ọhụrụ gbasara ngwaahịa a n'ezie ka ha wee nwee ike mepụta atụmatụ ogologo oge ha wee jiri ngwaahịa gị mee ka uto azụmahịa ha dịkwuo elu. Iji mezuo nke a, ọdịnaya bụ eze.
Ọdịnaya bụ eze
Ịre ahịa bụ igwe, na-ewepụta ọdịnaya dị mkpa, bara uru maka ndị ahịa dị ugbu a yana ndị na-atụ anya ya.
Ewezuga akwụkwọ akụkọ na ọkwa n'ime ngwaahịa maka mmelite na mwepụta dị mkpa, mee webinar dị ndụ yana njiri mara nke agbakwunyere ma ọ bụ kwalite. Nọgide na-aga n'ihu na ọdịnaya mmụta yana tupu ịbanye na webụsaịtị gị, dị ka ntuziaka, eBooks, mpempe akwụkwọ aghụghọ, na ndenye nlele. Gaba gaba...
Ibe FAQ kewara n'ime ngalaba dabere na njirimara ngwaahịa dị iche iche.
Ọdịnaya ọdịyo dị ka pọdkastị na-enye ọwa ọdịnaya ọzọ njikọ aka maka ndị ahịa.
Nzukọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Usoro nchịkwa mmụta (LMS) na vidiyo nkuzi na nkuzi.
Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na asambodo maka ndị chọrọ ịbụ ndị mmekọ ma ọ bụ ndị na-ere ere.
Amaghị ka esi eji ngwaahịa eme ihe bụ otu n'ime ihe na-agbasakarị maka ndị ahịa na-ewe iwe. Ihe ndị kwesịrị ekwesị iji kụziere ndị ahịa ka ha kpochapụ ihe kpatara ya.
Ihe ịga nke ọma ndị ahịa ogidi 3: Nkwukọrịta
Ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa ma ọ bụ na ọ bụghị, azụmahịa gị kwesịrị ibute nzikọrịta ozi dị irè ka ọ na-agba mbọ maka nguzobe na uto.
Ahụmahụ ndị ahịa mkparịta ụka (ECC) pụtara inye ndị ahịa nkwado na nduzi na-aga n'ihu n'otu n'otu. Ebumnuche nke CCE bụ imeghe nzikọrịta ozi ụzọ abụọ n'etiti onye ahịa na akara, n'ọkwa ebe ndị ahịa nwere obi ike na ha ga-abịakwute ihe ịga nke ọma reps na aro maka mmelite na nzaghachi n'eziokwu.
Mee enyi ndị ahịa site n'ịchọpụta ihe gbasara ha karịa ọrụ, ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịkekọrịta.
Ọ dị mfe na jargon teknụzụ, kwuo okwu n'asụsụ ndị ahịa ghọtara.
Emela ihere ịjụ ọtụtụ ajụjụ. Zụta onwe gị gbasara azụmahịa ha.
Hapụ na scripts; nwee ezigbo mkparịta ụka nke ahụmahụ na-eduzi. Dịka ọkachamara n'ihe gbasara ụlọ ọrụ, ịchọghị edemede.
Zute ndị ahịa ebe ha nọ. Jiri centralizing teknụzụ dị ka ikpo okwu njikwa mmekọrịta ndị ahịa (CRM) idobe ọnọdụ ndị ahịa niile n'otu ebe, n'agbanyeghị ọwa ọ si bịa.
Ọzọkwa, nkwurịta okwu dị irè pụtara iguzobe obodo gburugburu ika gị.
Obodo azụmahịa a na-ahụ anya bụ ngwá ọrụ dị irè maka ịkpọkọta ndị ahịa ọnụ ka ha gbasoo otu nzube mgbe ị na-eji ngwaahịa gị.
Otu obodo dị mfe - ma na ngwaahịa ma ọ bụ na mgbasa ozi ọha - nwere ike ịga ogologo oge iji jikọta ndị ọrụ na ajụjụ, azịza, na ọbụna mgbagha maka ụfọdụ njirimara ngwaahịa. Ọ na-enye ndị ahịa bi-uru - ohere iji netwọk na izute ndị ahịa ma ọ bụ ndị mmekọ nwere ike.
Ewezuga obodo azụmaahịa a na-ahụ anya, enwere ụzọ ndị ọzọ iji wulite ụkpụrụ obodo gburugburu ika gị…
Debe ndị ahịa gị ka ndị ndu echiche nwere ọdịnaya sitere na onye ọrụ.
Gbaa onye nnọchi anya ika ma ọ bụ mmemme onye mmekọ iji kwalite mgbasa ozi ika.
Ihe omume dị n'ịntanetị na nke na-anọghị n'ịntanetị na-enyere ndị ahịa aka ịkpata netwọk karịa.
Ezi nkwurịta okwu bụ isi azụmahịa. Ka ọ dị ugbu a, otu azụmahịa na-enye uru abụọ nke ndenye aha onye ahịa na ngwaahịa gị. Ọ bụ ihe ọzọ mere ị ga-eji hụ azụmahịa na ngwaahịa gị n'anya.
Ihe ịga nke ọma ndị ahịa ogidi 4: Nhazi
Nkwurịta okwu n'etiti otu azụmahịa gị bụ ogidi ikpeazụ nke ihe ịga nke ọma ndị ahịa pantheon. Kpọmkwem, ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa chọrọ nhazi nke ngwaahịa, ahịa, na otu ndị na-ere ahịa.
Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa maka ngalaba ọ bụla inwe ebumnuche nke ọ bụla iji nweta, ebumnuche ndị ahụ niile kwesịrị ịgbakwunye na ebumnuche azụmahịa nkekọrịta. Nhazi bụ usoro nke iguzobe nghota zuru oke iji nyere aka mmekorita ka mma n'ebe ebumnobi ndị ahụ na-ekerịta.
Ọ bụrụ na ha na-ekerịta ebumnuche, kesaa nsonaazụ, ma kesaa ibu ọrụ, emechaa ha ga-ekekọrịta ihe ịga nke ọma.
Nkà na ụzụ na-ekekọrịta bụ ọkpụkpụ azụ nke nhazi otu dị irè
Karịsịa, itinye n'ọrụ chọrọ ngwá ọrụ dị n'ebe ndị ọrụ nwere ike kekọrịta na ikwukọrịta ruo n'ókè dị iche iche.
Dị ka m na-ekwu, ahịa SaaS na-eto eto. Kemgbe ụwa dịpụrụ adịpụ na 2020, ngwaọrụ ndị a adịla ebe niile, yana ọtụtụ ihe ha nwere ike ime.
Teknụzụ CRM na-aga n'ihu n'ịkwado otu. Site na iweta data azụmaahịa niile n'okpuru otu nche anwụ CRM, azụmaahịa nwere ike iji ya kwado na akpaghị aka usoro, na-akparịta ụka n'etiti onwe gị gbasara isi data akọwapụtara, tọọ ọrụ metụtara ndekọ nke onye ọ bụla, na-akọ akụkọ, gamify, na iji anya nke uche hụ metrik na ebumnuche n'ime otu dashboard ahụ.
Haziri nke ọma, nkwurịta okwu oge niile n'etiti otu iji mechie loops nzaghachi
Mee ka ndị otu na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa na-ezukọ otu ugboro n'izu ka ha wee nweta ihe ha rụzuru n'izu gara aga. Kpebie ebumnobi e kerịtara emezugoro na nke a ga-emezu n'ọzọ. Jikọọ na kesaa nka nka na akaụntụ ndị ahịa nke ọ bụla iji merie ihe mgbochi ọ bụla nwere ike ime maka ndenye aha ha.
N'otu aka ahụ, ndị otu ngwaahịa kwesịrị ijide ngosi ngosi kwa izu iji kwalite ọganihu ha ozugbo, na-enye ndị ahịa ihe ịga nke ọma ohere itinye ya na oku nyocha ha na ndị ahịa.
Mepụta ọnụ ụlọ nkata nzaghachi n'ime ebe ndị ọrụ ihe ịga nke ọma nwere ike biputere ahụhụ ọ bụla ma ọ bụ ndụmọdụ sitere n'aka ndị ahịa yana ngwaahịa nwere ike hazie ha ozugbo na map ụzọ ngwaahịa ha. loops nzaghachi emechiri emechi bara uru maka ihe ịga nke ọma ndị ahịa. Ọdịdị ha chọrọ aka n'aka otu ọ bụla.
Ịre ahịa ma ọ bụ ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa na-aghọta ndị ahịa kpamkpam, wee nweta ihe ndị ahịa chọrọ na ihe ha chọrọ site na ngwaahịa. Ha na-agwa ndị ahịa na-enye nzaghachi.
Ịre ahịa na-emepụta ọdịnaya iji gosipụta na kuziere maka mmejuputa nzaghachi. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla buru ibu gbanwere, mgbe ahụ ọ nwere ike ịchọ mkpọsa nke ya.
Ndị otu ngwaahịa na-eme mgbanwe ndị ahụ, na-emechi loops nzaghachi n'anụ ahụ.
Nhazi otu na-enyere aka mechie loops nzaghachi ngwa ngwa, nke pụtara na ndị ahịa na-enweta kpọmkwem ihe ha chọrọ na mkpa site na ngwaahịa.
Ha sị na ọ gwụla ruo mgbe nwanyị mara abụba na-abụ abụ.
Ee, ihe bụ na ọ tụfuru olu ya. Njem ndị ahịa akwụsịbeghị ruo mgbe ị dara.
(Customer) Ihe ịga nke ọma bụ ihe megidere ọdịda.
Tags: CRMnzaghachi ndị ahịanjikwa mmekọrịta ndị ahịammekọrịta ndị ahịanyocha ndị ahịaahịa ihe ịga nke ọmaatụmatụ ịga nke ọma ndị ahịaisiokwu etiti enyemakaihe ọmụmaịnyịnyaọrụ ndị ahịa na-arụsi ọrụ ikenkeji ogelaghachi azụmaahịaNkwado ire ahịaahịa-eru eru ndunkuzi vidiyowebinars
George bụ Ọdịnaya Ọdịnaya Ọdịnaya na NetHunt CRM. Ide ihe ya. Ọ na-enwupụta ọkụ na teknụzụ na ụlọ ọrụ B2B, na-ekpuchi isiokwu dịgasị iche iche site na arụpụta ihe na usoro ahịa na mmekọrịta ndị ahịa. Ọ na-ejikọta ọdịiche dị n'etiti data na ihe okike na njirisi.
Kedu ihe bụ Exit Intent? Kedu otu esi eji ya kwalite ọnụego ngbanwe?
Gịnị bụ Backlinking? Otu esi emepụta backlinks dị mma na-etinyeghị ngalaba gị n'ihe ize ndụ